Xassan Shiikh Maxamuud oo loo doortay madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 4-ta sano ee soosocota. – Radio Daljir
Xassan Shiikh Maxamuud oo loo doortay madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 4-ta sano ee soosocota.
Seteembar 10, 2012 1:43 g 0
Moqdisho, Sept, 10 – Madaxwayne Xassan Shiikh Maxamuud ayaa tartan dheer kaddib waxaa loo doortay? madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudada 4-ta sanno ah ee soo socota.
Mudane Xassan Shiikh Maxamuud ayaa tartankii ugu dambeeyay waxaa uu ka guulaystay madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed oo wareegii 2-aad noqday murashaxii ugu codka badnaa tartamayaasha.
Natiijada codadka doorashada madaxwaynaha Soomaaliya ayaa waxay u dhacday si nabad-galyo ah oo xallaal ah, waxaana tirada natiijada codadka uu ku guulaystay Xassan Shiikh Maxamuud ay gaarayeen 109 cod, halka Shariif Shiikh Axmedna uu helay 70 cod.
Dawladda Puntland oo si diiran u soo dhawaysay madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud.
Faroole oo Garowe soo gaaray, iyo bannaanbax lagu soo dhawaynayo doorashada madaxwaynenimo ee Moqdisho ka dhacaysa.